KEDU ESI EZIGA FOTO SITE NA EMAIL - OZI - 2019
Kedu esi eziga foto site na email
Ụdị vidiyo dị iche iche, yana faịlụ ọ bụla ọzọ nke mgbasa ozi, na ihe ndị dị ugbu a aghọwo akụkụ dị mkpa nke ndụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla Intaneti. Site na njirimara a, ọdịnaya vidiyo na-achọrọ ka ezigara ndị ọzọ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Enwere ike ime nke a site n'enyemaka n'ụzọ nkịtị n'ụzọ ọ bụla ozi nhazi oge a, nke a ga-atụle mgbe e mesịrị na isiokwu ahụ.
Anyị na-eziga vidiyo site na email
Maka mmalite, rịba ama na ọ bụ ezie na ozi nzi ọ bụla a na-atụle n'isiokwu a nwere njikọ kpọmkwem na ọkpọ mgbasa ozi pụrụ iche site na ụlọ ọrụ ahụ, enweghi ike ikiri vidiyo na ntanetị. Ya mere, n'agbanyeghị otu esi ezipụ vidio ahụ na e-mail, n'ọtụtụ ọnọdụ, onye nnata ga-enwe ike ibudata ya na kọmputa ya maka nlele ma ọ bụ edezi.
Ikike ịlele vidiyo na ntanetị bụ naanị ugbu a n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ ma ọ bụghị ọrụ ozi.
Na-agbanye na nyochaa nke ikike ịnyefe vidiyo, ọ dị mkpa ịṅa ntị na eziokwu ahụ nwere ike ijikọta ọtụtụ igbe email na-enweghị ihe mgbochi. Ya mere, vidio zitere site na Gmail nwere ike ibudata ya site na onye nnọchiteanya jiri igbe email Mail.ru.
Hụkwa: Otu esi emepụta igbe akwụkwọ ozi
Banyere ịnyefe data ọ bụla n'ime ozi eletrikiiki, Yandex Mail nwere ọrụ dị ntakịrị. Karịsịa, nke a na-emetụta eziokwu ahụ bụ na ọrụ ozi a na-enye otu ohere ohere ịgbakwunye vidiyo, nke nwere njikọ chiri anya n'izipụ faịlụ ọ bụla.
Ejiri ozi mail sitere Yandex adịghị enye iwu ọ bụla a ga-etinye na vidiyo nke vidiyo. Otú ọ dị, buru n'uche na mgbe ị na-ebufe ntinye na nchịkọta dị ala, akara ngosi ahụ agaghị egosipụta nkwụnye faịlụ mbụ.
Mgbe ị kwusịrị okwu mmalite ahụ, ị ​​nwere ike ịga n'ihu nyochaa usoro nbudata na izipu vidio.
Mepee ozi nzi ozi site na Yandex ma gaa na taabụ. Igbe mbata na ngalaba "All Categories".
N'elu ihuenyo ahụ n'akụkụ aka nri nke menu ndị ọzọ na ọrụ ndị ọzọ, chọta bọtịnụ ahụ "Dee" ma pịa ya.
Kwadebe ozi maka mbubata na mbido site na ijuputa mpaghara ederede, ịkọ ndị nnata na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, isiokwu nke mkpesa ahụ.
Iji malite usoro nke ịdebe vidiyo, pịa akara ngosi ahụ. "Tinye faịlụ site na kọmputa" ya na mpịakọta akwụkwọ na ala nke windo nchọgharị.
N'otu aka ahụ, ịnwere ike iji akara ngosi ahụ na isi nchịkọta ederede nchịkọta ederede.
Site na onye nyocha nke sistemụ arụmọrụ gị, mepee ndekọ ahụ na vidiyo achọrọ.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhọrọ vidiyo na bọtịnụ òké aka ekpe wee jiri bọtịnụ ahụ "Meghee".
Ugbu a ịkwesịrị ichere maka njedebe nke usoro ị na-ebugote vidiyo na ozi gị.
Usoro nbudata vidiyo nwere ike ịkwụsị site na ịpị akara ngosi kwekọrọ na onyinyo nke obe.
Mgbe i mechara nbudata ihe ndekọ ahụ na leta ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ma ọ bụ budata ya.
Vidiyo mgbe nhichapụ nwere ike weghachite.
A gaghị atụ aro ka ị jiri ohere nke mgbake, ebe ọ bụ na ntinye nke leta nke nwere mgbakwunye dị otú ahụ nwere ike ime ka njehie.
Ozugbo i mechara mpaghara niile a chọrọ ma gbakwunye vidiyo achọrọ na Mgbakwụnye, ị nwere ike ịga n'ihu n'iziga ozi ahụ site na iji bọtịnụ ahụ "Zipu".
Site n'iziga ozi na mgbakwunye dị otú ahụ, onye nnata ga-enweta akwụkwọ ozi yana ike ibudata ma gbakwunye faịlụ mgbasa ozi agbakwunyere na Yandex Disk.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro izipu vidiyo site na iji Yandex na-eziga ọrụ ozi adịghị mma. N'ezie, maka nbudata nsogbu n'enweghị nsogbu na iziga gị mkpa ịgbaso ntuziaka niile na ntụziaka.
The mailbox mail from Mail.ru, n'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ na yiri ego, na-enye ndị ọrụ na a dịtụ ukwuu ọtụtụ nke ohere banyere izipu nke dị iche iche azụmahịa. N'okwu a, ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ ndị ọzọ anaghị achọ ka ị nyochaa nyocha zuru ezu nke ụzọ niile nke ọrụ nke saịtị a.
Ọbụna ozi nzi ozi a na ohere dị ukwuu na-eme ka ị ghara ịma.
Biko rịba ama na ihe ọ bụla a ga-atụle na-emetụta ọ bụghị naanị na vidio, kamakwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ.
Gaa na igbe akwụkwọ ozi gị na saịtị ọrụ Mail.ru Mail na mepee taabụ "Akwụkwọ edemede".
N'elu aka ekpe nke windo ihe nchọgharị dị na ya pịa bọtịnụ ahụ. "Dee akwụkwọ ozi".
Mgbe ị juputara mpaghara niile ma na-akwadebe ozi maka izipu, pịa njikọ "Tinye faịlụ"dị n'okpuru igbe ederede "Isiokwu".
N'iji isi Windows OS Explorer, dee ụzọ zuru ezu na faịlụ ma pịa igodo "Meghee".
Dị ka ị nwere ike ịkọ, mgbe mmalite nke nbudata ga-echere ichere maka mmecha ya.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike itinye ọtụtụ vidiyo ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ n'otu ụzọ ahụ. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke faịlụ niile gbakwunyere, nakwa ikike iji kpochapụ ha kpamkpam, dị gị n'aka nkwụsịtụ ole na ole.
Nke a na-emetụta ụzọ niile nke ịgbakwunye vidiyo na akwụkwọ ozi ahụ.
N'ezie, ọzọ ị na-adọrọ uche gị gaa n'ụzọ dịgasị iche iche nke ọrụ a, Mail.ru Mail na-enye ọtụtụ ụzọ ọzọ maka ntinye ntanye n'ime ozi.
Na-esote njikọ ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ, chọta ma jiri bọtịnụ ahụ "Site n'igwe".
Na windo nke mepee, gaa na nchekwa ahụ na mbido na mbụ ma chọrọ ka agbakwụnye na leta.
Usoro a, dika i nwere ike ihu, choro otutu ohere n'anodu nchekwa gi.
Mgbe ịmepụtara nhọrọ na-esote faịlụ mgbasa ozi chọrọ, pịa bọtịnụ "Tinye" na ala aka ekpe.
Ugbu a, a ga-etinye vidio ahụ ebudatara na nchịkọta nyochaa na mbụ ma nwee ike zigara ndị ọrụ ndị ọzọ dị ka akụkụ nke ozi ahụ.
Na mgbakwunye na ụzọ ndị a tụlere, ọ gaghị ekwe omume iji gbanwee ụzọ nke ịgbakwunye faịlụ mgbasa ozi site na akwụkwọ ozi ndị ọzọ. Mata ngwa ngwa na usoro a ga-adịrị gị naanị mgbe ị jikọtara akwụkwọ na leta ahụ ma zipụ ha ma ọ bụ chekwaa ha na drafts.
Gaa na nchịkwa nchịkwa dị n'okpuru akara ederede. "Isiokwu" ma họrọ njikọ "Site Mail".
Iji menu igodo na ngalaba nke igbe gị, chọta ndekọ a ga-agbakwunyere.
Mgbe ịchọta na ịhọrọ vidiyo ahụ achọrọ, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye".
N'ihi ihe mgbakwunye na-aga n'ihu, vidiyo ahụ, dịka akwụkwọ ndị ọzọ, ga-apụta na ndepụta nke mgbakwụnye.
Ziga ozi ahụ e kere eke ka onye nnata a chọrọ.
Na onye na-ezigara, ihe ndekọ niile ị gbakwunye ga-abụ na mgbakwụnye na ike ịkwanye ma chekwaa na igwe ojii nchekwa Mail.ru.
Na nke a na ozi ozi a ị nwere ike mechaa, n'ihi na taa ọ bụ ihe niile ohere Mail.ru na-enye maka izipu vidiyo.
Igbe ntanetị nke Google nyere, enweghị ike ịnya isi maka ọtụtụ ohere iji zipu ụfọdụ vidiyo na ozi. Otú ọ dị, Gmail ka na-enye ohere dị mfe iji rụọ ọrụ na mail, nke karịrị ihe na-eme maka enweghị ọrụ.
A na-atụle iji Gmail na-atụ aro maka ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ọrụ ndị ọzọ na Google.
Biko mara na iji nwee ike iji nlezianya nyocha ụzọ nke izipu mkpado n'ime ozi ịntanetị site na Gmail, ị ga-amụta otu esi eji nchekwa igwe mbanye Google Drive.
Ozugbo ị mepee igbe ụlọ akwụkwọ ozi gị na ebe nrụọrụ weebụ Gmail, jiri bọtịnụ na menu nhọrọ "Dee".
E meghere ya n'akụkụ aka nri nke ederede editọ, ọ bụ na-achọsi ike ịsụgharị n'ime ụdị ihuenyo zuru ezu.
Dị ka ọ dị na ọrụ ndị ọzọ, buru ụzọ jupụta na ngalaba ndị ahụ, wee chee gị anya na ngwá ọrụ ahụ na ala nke nchịkọta akụkọ ahụ.
Mgbe ị kwadebere ozi ahụ, na ngwá ọrụ ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ pịa akara ngosi ahụ na mpịakọta akwụkwọ.
Mpịpị a nwere ngwaike ngwaọrụ. "Tinye faịlụ".
Site na windo arụmọrụ dị mma, họrọ vidiyo a ga-etinye ma pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
Chere ruo mgbe ntinye a chọrọ iji kwado nchekwa nchekwa nwa oge.
N'ikpeazụ, i nwere ike izipu ozi-e na nkekọ a, hichaa vidiyo ma ọ bụ ibudata ya na kọmputa gị.
Ụzọ ọzọ nke ịgbakwunye otu vidiyo na akwụkwọ ozi, dịka ị nwere ike ịkọ site na mmalite okwu a na nkebi nke isiokwu ahụ, na-enye gị ohere ịgbakwunye otu vidiyo na ozi na-eji Google mbanye.
Na otu ihe eji eji ngwá ọrụ ala, jiri akara akara ngosi nke Google Drive na akara ngosi.
N'ime windo nwere njikọ, a ga-enye gị data niile na Google Drive gị. N'ebe a, ị ga-ahọrọ vidiyo nke ị ga-eji kwadebe tupu oge eruo.
Ọ bụrụ na i tinyeghị vidiyo n'ihu, naanị mepee nchekwa igwe ojii site n'aka Google na teabụ ọhụrụ, bulite vidiyo ma rụọ ọrụ niile a haziri.
Mgbe ịhọrọ ihe edere ederede, jiri bọtịnụ ahụ "Tinye" na nkuku ala aka ekpe nke ihuenyo.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịhọrọ otu, mana ọtụtụ vidiyo n'otu oge.
Ntinye agbakwunyere na-enweghị nbudata ọzọ ga-agbakwunye na isi ọdịnaya nke leta ahụ.
Ugbu a, ị ga-eziga ozi site na iji njirimara interface dị mma nke ọrụ Gmail.
Mgbe meghere akwụkwọ ozi ahụ, onye natara ga-enwe ike ibudata ma ọ bụ chekwaa vidiyo na Google Disc. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na faịlụ nwere isi ihe nwere ike ịnweta, yana nchịkọta ederede nke ọrụ ahụ na-akwado, a ga-ele vidiyo ahụ na ntanetị.
Anyị nwere olileanya na ọ gaghị esiri gị ike ịghọta ntụziaka ndị anyị dere.
Ihe kachasị ọhụrụ na ewu ewu, yana ọnụ ọgụgụ nke ohere, bụ ozi nzi ozi Rambler. Nke a na-enye ezigbo ọnụọgụ nke ohere, ma ị nwere ike ịmepụta vidiyo site na iji otu usoro.
Na ihe nchọgharị Internet ọ bụla, mepee ebe obibi nke ozi Rambler ma pịa bọtịnụ dị n'elu ihuenyo ahụ "Dee akwụkwọ ozi".
N'ịbụ ndị jupụtara na ntinye ederede ederede nke ozi a na-eme, pịgharịa gaa na ala.
Na-esote bọtịnụ ahụ "Zipu" chọta ma jiri njikọ ahụ "Tinye faịlụ".
Na Windows Explorer mepere emepe, chọpụta vidiyo ahụ wee pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
Chere ruo mgbe ebudatara ihe ndekọ ahụ na saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, n'usoro idezi ozi, ịnwere ike wepu clip ahụ a kwadoro site na leta ahụ.
Dị ka nzọụkwụ ikpeazụ, kwupụta ozi na-eji bọtịnụ "Zipu ozi-e".
Onye natara ụdị ozi a ga-enwe ike ibudata vidiyo ọ bụla.
N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ikiri vidiyo na ntanetị.
N'ezie, ọrụ a kachasị mfe iji n'ihi obere ọnụ ọgụgụ nke ohere. Otú ọ dị, na-atụle uru nke ihe ndị ọzọ yiri ya, ihe ọ bụla dị mkpa nke ịmepụta vidiyo site na ozi Rambler furu efu.
N'ikpeazụ, isiokwu a kwesịrị ịkọwa na ọrụ ndị ahụ a tụlere bụ nanị ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. N'otu oge ahụ na Ịntanetị, ị nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ na-enye gị ohere izipu faịlụ vidiyo site na iji ụzọ ndị yiri ya.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ozi 2019